Xaqiiqooyin Xiiso leh oo kusaabsan Gallium | Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan walxaha kiimikada
Gallium waa curiyaha 31-aad ee unugyada Nidaamka Nidaamka Xilliga (Periodic System Table) oo uu saadaaliyay farmashiistaha Ruushka iyo alifle Dimitri Mendeev, kaasoo abuuray jadwalka xilliyeed ee canaasiirta. Wuxuu magacaabay walxaha ka maqan eka - aluminium maxaa yeelay wuxuu ogaa inay ka hoos mari doonaan aluminium miiska loo yaqaan 'Periodic Table' ee unugga 31. Halkan waxaa ku yaal 10 xaqiiqo oo xiiso leh oo ku saabsan gallium - cunsurka loogu magac daray diiqii Faransiiska.
Goobta gallium ee miiska nidaamka xilliyada.
10 Xaqiiqooyin Xiiso leh oo kusaabsan Gallium
1. Sannadkii 1875-kii, Lecoq De Boisbaudran wuxuu gallium saa'id ah ka soocay laba xariiq oo midab guduudan oo muunad ah oo ku jira shaybaarka loo yaqaan 'sphalerite' oo ay soo saartay elektrolysis ee hydroxides Si kastaba ha noqotee, farmashiistaha Dmitri Mendeleev wuxuu saadaaliyay jiritaanka canaasiirta sanadkii 1871, isagoo soo jeediyay magaca canugga "eka - aluminium" meesha uu ka joogo miiska xilliyeed.
Gallium waa bir qalin xadi ah.
2. Lecoq De Boisbaudran wuxuu cunsurkan 31-aad u magacaabay "gallia" isagoo ku sharfaya dalkiisa hooyo, Faransiiska. Gallia waa magaca Latin ee Gaul. Qaarkood sidoo kale waxay yiraahdaan Lecoq De Boisbaudran magaciisa waa riwaayad ku saabsan ereyada, isaga oo magacaabaya qaybtiisa iyo sidoo kale Faransiiska. "Le coq" waa erayga faransiiska oo macnihiisu yahay "diiq", halka erayga Latin ee "diiq" uu yahay "gallus". Cunsurka ayaa markaa loogu magac daray gallium ka dib -ium-ku-dhererka walxaha biraha.
Lecoq De Boisbaudran wuxuu u magacaabay cunsurkan 31-aad "gallia" isagoo ku sharfaya magaaladiisii ​​Faransiiska, Gallia wuxuu ahaa magaca Latin ee Gaul. "Le coq" waa erayga faransiiska oo macnihiisu yahay "diiq", halka erayga Latin ee "diiq" uu yahay "gallus".
3. Xaqiiqdii, Gallium wax door ah kuma lahan cilmiga nafleyda dadka iyo waliba xayawaanka iyo dhirta. Waa bir saafi ah oo loo arko inaysan sun ahayn.
4. Daawada, gallium waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo bararka iyo calaamadaha burooyinka. Cunsurkaani wuxuu leeyahay astaamo lidka ku ah kansarka, gaar ahaan kuwa aan Hodgkin lymphoma iyo kansar lahayn. Gallium amine - phenol compound wuxuu aad ugu sumoobaa dulinka duumada, oo ay ku jiraan kuwa u adkaysta chloroquine.
5. Gallium si fudud ayaa loogu dhalaali karaa calaacasha gacanta ama cabitaanka kulul.
Gallium si fudud ayaa loogu dhalaali karaa calaacasha gacanta ama cabitaanka kulul.
6. Gallium wuu sii ballaadhayaa markuu barafoobo. Gallium waa in aan lagu keydin weelal bir ama dhalo ah, maxaa yeelay way kala jabi karaan marka ay galliumku weynaadaan.
7. Neutrino Observatory-ka Talyaaniga waxay adeegsataa xaddi aad u tiro badan oo ah ‘gallium trichloride’ si ay u darsaan maadooyinka loo yaqaan ‘neutrinos’ ee qorraxda laga soo saaro. Neutrinos waa curiyeyaal lagu abuuray ilbidhiqsiga koowaad ee koonka - xitaa atamka ka hor - waxaana si isdaba joog ah looga soo saaraa falcelinta nukliyeerka qorraxda iyo xiddigaha kale.
Xarunta Neutrino Observatory ee dalka Talyaaniga waxay isticmaashaa qadar aad u tiro badan oo ah ‘gallium trichloride’ si ay u darsaan maadooyinka loo yaqaan ‘neutrinos’ ee qorraxda soo baxa.
8. Gallium-ka dareeraha ahi wuxuu sameeyaa muraayad gaar ah sababta oo ah curiyuhu wuxuu baari karaa meelo badan. Gallium wuxuu dhex galaa muraayadda, hoonbarrooyinka, iyo xitaa maqaarka dadka.
9. Gallium arsenide waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro Laydhka buluugga ah ee aadka u dhalaalaya.
10. In ka badan 95% gallium-ka waxaa loo isticmaalaa warshadaha semiconductor-ka. Gallium daahir ah ayaa iska caabiya weerarka aashitada macdanta. Lakabka oksaydhka ee lagu sameeyay dusha sare wuxuu ilaaliyaa gudaha.
In ka badan 95% gallium-ka waxaa loo isticmaalaa warshadaha semiconductor-ka.
Waxaad u baahan tahay inaad sirta u sheegto, maskaxdaada dejiso, ogow YL Doll ku caawin
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan helium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan lithium Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Beryllium Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Kaarboonka Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Nitrogen Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Ogsijiin Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Neon Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Fluorine Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan chromium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan birta naxaasta ah Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Zinc Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Nickel Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Cobalt Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Birta Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Manganese Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Vanadium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Titan Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Scandium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Kaalshiyamka Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan hydrogen - waa curiyaha ugu fudud miiska xilliyeed.